Mawduucyo kale oo ku saabsan kalluunka iyo aquariums | Kalluunka
Qeybta kuwa kale Waxaan awoodi doonnaa inaan helno wax kasta oo la xiriira adduunka kalluunka, wax kasta oo aan lagu dhejin karin meel gaar ah waxaad ka heli doontaa xulashada kuwa kale. Talooyinka, faahfaahinta, qalabka, wararka ama xitaa xiisaha ku saabsan adduunka kalluunka iyo aquariums-ka.
Goobtan waxaad ka heli doontaa wax kasta oo la xiriira kalluunka sidaa darteedna waxaa wanaagsan in la ogaado in kastoo aynaan awoodin ku abaalmari qayb ahaan, sidoo kale boos ayey ku leeyihiin balooggan.
Ha iloobin taas Macluumaadku waa awood waligoodna kuma xuma in la sii ballaariyo dhinac walba.
Muusiggu kalluunka sidoo kale wuu saameeyaa
Markii aan bilowno inaan kalluun yeelano oo aan daneyno adduunka oo dhan aquariums-ka, waxaan la yaabanahay haddii aan dhigno ...
Mitirka pH dijitaalka ah
Markaynu leenahay haan kalluun waxaa muhiim ah inaan ogaano astaamaha iyo shuruudaha noocyada aan xanaaneyno. Mid ka mid ah…
Maanta waxaan ka hadlaynaa shark aan waxyeello u lahayn dadka inkasta oo muuqaalkiisu yahay. Waxay ku saabsan tahay…
Waxay yiraahdaan waa xayawaanka ugu xirfada badan adduunka oo dhan. In kasta oo ay jiraan noocyo aad u fara badan oo loo yaqaan 'shark' oo dhan ...
Maanta waxaan ka hadlaynaa xayawaan awood u leh inuu gurigiisa macno u yeesho meel kasta oo uu doonayo. Waan ogahay…
Aargoosatada buluugga ah
Maanta waxaan ka hadlaynaa aargoosatada buluuga ah. Waa crustacean ka tirsan qoyska Parastacidae. Leedahay…
Hal fasal oo ka mid ah xayawaanno loo yaqaan 'shark' oo muddo dheer loo tixgeliyey xayawaan kalluumeysi isboorti ayaa ah mako shark Hayso…
Maanta waxaan ka hadlaynaa mollusk oo ku nool inta u dhaxaysa 2000 iyo 5000 mitir qoto dheer. Waxay ku saabsan tahay qooska ...
Mid ka mid ah libaax badeedka loo yaqaan inuu yahay mid ka mid ah noocyada ugu da'da weyn adduunka waa shark ...
Maanta waxaan ka hadli doonnaa nooc ka mid ah noocyada cajiibka ah ee shark. Waxay ku saabsan tahay libaax badeedka. Magaca sayniska ...
Immisa nooc oo kalluun ah ayaa jira?
Waxaan eegeynaa carsaanyo Yeti ah
Kalluunka sidoo kale waa wax xiiso leh
Taariikhda Xeebaha Badda